Wararkii ugu dambeeyay Qarax GAARI oo ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay, 3 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii Qarax inta u dhaxeysa Daarta MBC iyo Isgoyska Black Sea ee Magalada Muqdisho.
Qaraxan oo ka dhashay Gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa, iyadoo Gaariga qarxay sida la sheegay ay laheyd Jaamacadda SIMAD oo ka mid ah Jaamacadaha ku yaalla Muqdisho.
Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay Nin lagu Magacaabi jiray Maxamed Jeylaani oo ka tirsanaa Shaqaalaha Jaamacadda SIMAD,sidoo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaas Sasdex ruux oo ka Shaqeynayay maqaayad ku taalla halka uu qaraxa ka dhacay.
Xaalada goobtii uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan ah mid degan,waxana dib u furmay isku-socodka dadka iyo gaadiidka oo ay hakad geliyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda markii uu qaraxa dhacay.
Qaraxaan ka dhacay Magalada Muqdisho ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Maanta wadooyinka qaar ee Magalada Muqdisho ay xiran yihiin,waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in Madaxweynaha Jubbaland uu kusoo wajahan yahay Magalada Muqdisho.